Ndị ọkachamara na Semalt maara otú e si gbochie spam na Google Analytics
Ozi ntinye akwụkwọ na-ewe onye ọ bụla iwe, karịsịa onye na-arụ ọrụ weebụ e-commerce. Mgbe ị na-ele data nchịkọta Google Analytics gị, ị nwere ike ịgba akaebe gbasara spam na-abata na saịtị gị. O siri ike ịkọ ma nyochaa arụmọrụ nke arụmọrụ ịntanetị gị.
Ihe ka ọtụtụ n'ime ụkpụrụ nduzi maka iwepu spam na-edekọ ihe adịghị ka ọrụ. N'ọtụtụ ọnọdụ, ndị mmadụ na-etinye ego na nwa ojii SEO ndị na-ejedebe inye ndị mmadụ okporo ụzọ sitere na spam ma ọ bụ bots. Enwere ụzọ ndị nwere ike inyere gị aka wepu ụzọ azụmahịa spam si na Google Analytics.
Ụfọdụ n'ime usoro a ga - esi nagide spam ahụ bụ Andrew Dyhan, Onye Nlekọta Ndị Nlekọta Ọrụ nke Semalt .
Ntuziaka spam bụ okporo ụzọ nke na-abịa na ebe nrụọrụ weebụ gị site na ngalaba ndị ọzọ. N'ọtụtụ ọnọdụ, nkwado ọ bụla na-enye onye na-ahụ maka data na-ezigara ya. Ụfọdụ n'ime ngalaba ndị nwere nleta weebụ ndị dị nro sitere na bọtịnụ ma ọ bụ netwọk nke bọọlụ. Ntughari ntughari nwere ike ime na uzo abuo:
Akara spam a na-egosi na ibe Google Analytics. N'otu aka ahụ, nleta weebụ ndị na - adịghị ọcha nwere ike igosi na data nchịkọta data gị ma ọ bụghị na ntanetị weebụ gị. Nleta nleta ndị a na-amaghị aha na-eme ka nleta nlekọta anụ ahụ.
Ụfọdụ ngalaba nwere ike ịnwe bọtịnụ okporo ụzọ..Ịnweta nleta weebụ site na bọọlụ nwere ike iduga na ebe nrụọrụ weebụ na-enweta ọtụtụ nleta nleta sitere na isi mmalite mmadụ. Botnets na crawlers weebụ nwere ike iduga ọtụtụ nsogbu ọjọọ na ozi weebụsaịtị.
N'okwu abụọ ahụ, okporo ụzọ na-ezo aka na-eduga na ozi ụgha banyere ọganihu nke mgbasa ozi ahịa. Ọzọkwa, ọtụtụ akwụkwọ nleta ọhụụ na-abịa site na spam na-eme ka SEO bụrụ ihe ịma aka iji nyochaa ma gbanwee ihe mgbaru ọsọ gị.
Ndị mmadụ nwere ike wepu okporo ụzọ a site na Google Analytics na-esote nzọụkwụ dị mfe. Otu ụzọ kachasị dị irè nke ịrụ ọrụ a bụ site na itinye faịlụ .htaccess na ndekọ ndekọ nke ngalaba gị. Nke a na-eduzi crawlers na ụzọ kwesịrị ekwesị iji jikwaa ihe nkesa gị. Ndị mmadụ na-eji ihe nkesa Apache nwere ike ịme ụfọdụ iwu iji mee mgbanwe ahụ. Ịchịkwa usoro a na nlekọta dị ezigbo mkpa. Ịkpọlata ebe nrụọrụ weebụ niile dị mfe mgbe ọ na-agba ọsọ.
Nchọpụta spam dị elu nwere ike inyere aka wepu spam na-ezo. Na akaụntụ Google Analytics, ị nwere ike iji njirimara a na menu ha. Ọzọkwa, ị nwere ike ịgbakwunye omenala nzacha na ngwá ọrụ. Ihe nzacha a nwere ike igbochi okporo ụzọ si n'otu ngalaba. O nwekwara ike igbochi okporo ụzọ na-eji adreesị IP. Onye ọrụ ntanetị ọrụ echekwara nwere ike inyere aka na nchọpụta ụfọdụ mkpesa spam na-echebara akaụntụ email njirimara.
Ntugharị spam nwere ike belata izi ezi nke ozi na akaụntụ Google Analytics gị. Ọ dị mkpa iji wepụ okporo ụzọ spam na-ezigara dị ka ihe ndị a na-adịghị ahụkebe nwere ike iduga n'ịwapụta akụ. Ọzọkwa, okporo ụzọ a na-eme ka ndị mmadụ mee mkpebi na-ezighị ezi banyere ụzọ mgbasa ozi ịntanetị na-arụ ọrụ. Ọ dị mkpa maka ụlọ ọrụ ọ bụla ma ọ bụ azụmahịa iji zoo spam. Ụfọdụ n'ime echiche ndị ị nwere ike iji wepụ spam na-ezo aka na nduzi a.